CCD Tracing-edge လေဆာဖြတ်တောက်စက်ထုတ်လုပ်သူများ, တရုတ်, စက်ရုံ, စျေးနှုန်း - Shenzhen Simida Intelligent equipment Co. , Ltd.
Box ကို centrifuge
ဖြတ်တောက်စက်ရှာကြံ CCD အစွန်း
လက်စွဲစာအုပ် optical ဖိုင်ဘာလေဆာ marking စက်
အလိုအလျောက် marking နှင့်တင်စက်
လက်စွဲအစိမ်းရောင်လေဆာ marking စက်
အလိုအလျောက်လေဆာ marking စက်
အပြည့်အဝအော်တို KN95 မျက်နှာဖုံး
Semi Auto KN95 မျက်နှာဖုံး
အပြည့်အဝအော်တို Disposable အရွယ်ရောက်ပြီးသူမျက်နှာဖုံးစက်
Planetary centrifugal deaeration ရောနှော
Non- လေဟာနယ် Planetary centrifugal ရောနှော
လေဟာနယ် Planetary centrifugal ရောနှော
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လေဆာစက် > CCD Tracing-edge လေဆာဖြတ်တောက်စက်
အိတ်ဆောင်ဖိုင်ဘာလေဆာစက် 20W / 30W / 50W
CCD Tracing-edge လေဆာဖြတ်တောက်စက်
2000ml ရောစပ်စွမ်းရည် Non- လေဟာနယ် Planetary centrifugal ရောနှော
300ml ရောစပ်စွမ်းရည် Non- လေဟာနယ် Planetary centrifugal ရောနှော
150ml ရောစပ်စွမ်းရည် Non- လေဟာနယ် Planetary centrifugal ရောနှော
မြန်နှုန်းမြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် galvanometer အပြောင်းအလဲမြန်ဆန်သောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော UV လေဆာဖြတ်စက်ကိုမထိတွေ့နိုင်သောပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ ကိရိယာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လျှို့ဝှက်ပျက်စီးမှုကိုရှောင်ပါ။
1. Product Introduction of the CCD Tracing-edge လေဆာဖြတ်တောက်စက်
မြန်နှုန်းမြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် galvanometer အပြောင်းအလဲနှင့်အတူမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော UV လေဆာဖြတ်ထုတ်စက် ကိရိယာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လျှို့ဝှက်ပျက်စီးမှုကိုရှောင်ပါ။
● 355nm ခရမ်းလွန်လေဆာကိုအသုံးပြုခြင်း။ တိုတောင်းသောလှိုင်းအလျား၊ မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ သေးငယ်သောအပူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုပမာဏ၊ ရေအေးကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ စက်သန့်ရှင်းခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်းနှင့်ဖုန်မှုန့်များပါ ၀ င်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းများပါ ၀ င်သောအရာဝတ္ထု၏မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုလျင်မြန်စွာဖျက်ဆီးနိုင်သည်။
- မြန်နှုန်းမြင့်ရွေ့လျားနေသောဂန္တ ၀ င်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပျံသန်းနေသောအလင်းလမ်းကြောင်း၏ဒီဇိုင်းကိုအထူးအလိုအလျောက်တင် / ချစက်ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်သို့မဟုတ် SMT လိုင်းနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
- သူသည် DXF နှင့် GERBER ပုံရိပ်ဖိုင်များကိုမှတ်သားနိုင်သည်၊ မှိုများကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်၊ ရှေ့ပြေးပုံစံပုံသဏ္,ာန်၊ ဖြတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်တူးဖော်ခြင်းတို့ကိုသိရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသော၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ ခက်ခဲသောထုတ်ကုန်များအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။
- CCD အလိုအလျှောက်နေရာချခြင်းလျော်ကြေးပေးခြင်းပုံပျက်သောလုပ်ဆောင်ချက်သည်ထုတ်ကုန်၏ပုံသဏ္toာန်ကိုပိုမိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်ပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောအလိုအလျောက်အစွန်းရှာဖွေခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်လျော်ကြေးပေးခြင်းဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ယခင်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းရှိဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောသွေဖည်ခြင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းပိုပြီးချောမွေ့သည်။
- နှစ်ဘူတာရုံပလက်ဖောင်း၏ဒီဇိုင်းသည်လက်စွဲ (သို့) အလိုအလျောက်ခြယ်လှယ်ထားသောပစ္စည်းများအစားထိုးချိန်ကိုသက်သာစေသည်။ ၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်အလားတူပစ္စည်းအမျိုးအစားများ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို ၃၀% ကျော်စေသည်။
- မိုဘိုင်းဖုန်းကင်မရာ module ဘုတ်၊ လက်ဗွေအသိအမှတ်ပြု module ဖြတ်ခြင်း၊ T-card မှတ်ဉာဏ်ကဒ်၊ FPC ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆားကစ်ဘုတ်အမြန်နှုန်းလေဆာဖြတ်ခြင်း၊ အထူ 1mm ဖြတ်ခြင်း၊ burrs မပါဘဲပြုပြင်ခြင်း၊
- ၀ င်းဒိုးပေါ်အခြေခံပြီးအမှီအခိုကင်းသည့်တီထွင်ဆန်းသစ်သောထိန်းချုပ်မှုဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ရှိပြီးတရုတ်အပြင်အဆင်အပြည့်နှင့် "တစ်ခလုတ်" လည်ပတ်မှုသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်သည်။
(၂) CCD Tracing-edge Laser Cutting Machine ၏ကုန်ပစ္စည်း Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
355m လှိုင်းအလျား, အမေရိကန်အလင်းလှိုင်း, SPI လှိုင်း
output Pulse အကျယ်
Galvanometer ၏စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှု Range
100mm / s - ဖြတ်တောက်ခြင်းအထူဖြတ်တောက်ခြင်းထိရောက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်
gantry ရွေ့လျား linear မော်တာ
Motion Platform တည်နေရာတိကျမှု
တိုးချဲ့နှင့် Shrinkage လျော်ကြေးငွေ function ကို
MAR အမှတ်အသား၊ ယူနီဖောင်းပုံသဏ္fileာန်ဖိုင်အရအလိုအလျောက်တိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ကျုံ့ခြင်းလျော်ကြေးပေးခြင်း
အပူချိန် ၂၅ ± ၅ ƒ၊ ဆီးနှင်းသိပ်သည်းဆမရှိခြင်း၊ မြေတုန်ခါမှုအရှိန် (0.01mm / (s ~ 2))
3.5KW / H လေဟာနယ်သန့်ရှင်းစက်နှင့်အတူ
ခန့်မှန်းခြေ ဖုန်စုပ်စက်နှင့်အတူ 2500KG
DXF နှင့် Gerber
CCD positioning system, ဂရပ်ဖစ်တည်နေရာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သော၊ အလိုအလျောက်တည်နေရာပြစနစ်
COB sub- ဘုတ်အဖွဲ့
Hot Tags: CCD Tracing-edge လေဆာဖြတ်တောက်စက်, တရုတ်, ပေးသွင်း, ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, စျေး, Buy
COB Centrifugal မိုးရွာသွန်းမှုစက်
အလိုအလျောက် Centrifugal မိုးရွာသွန်းမှုစက်
လိပ်စာ: 12 / F, အဆောက်အအုံ B, Quanju စက်မှုဥယျာဉ်, Gongming General Shipinggang, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong Province, China
SMIDA သည် ၂၀၁၇ တောင်ပိုင်းတရုတ် (ကွမ်ကျန်း) အဆင့်မြင့်လေဆာနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အသုံးချပြပွဲသို့တက်ရောက်သည်2020/07/28
မူပိုင်ခွင့် @ 2019-2021 Shenzhen Simida Intelligent Equipment Co. , Ltd အားလုံးမူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။